၂၀၃၀ပြည့်နှစ်တွင် အမေရိကန်၌ ရောင်းချရမည့် မော်တော်ကားအသစ် ထက်ဝက်မှာ လျှပ်စစ်ကားများဖြစ်ရမည်ဟု ဘိုင်ဒန်ကြေညာ - Xinhua News Agency
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ချီကာဂိုမြို့၊ McCormick Place ၌ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော ၂၀၂၁ ချီကာဂို ကားပြပွဲ တွင် Jeeps ဂျစ်ကား ပုံစံအမျိုးမျိုးကို ပြသထားစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန်၊ သြဂုတ် ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ရောင်းချမည့် မော်တော်ကားအသစ် အရေအတွက် ထက်ဝက်မှာ ကာဘွန်ထုတ်လွှတ်မှု လုံးဝမရှိသော ကားများဖြစ်စေရန် ညွှန်ကြားသည့် အမိန့်အား အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်က သြဂုတ် ၅ ရက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
“အမေရိကန်ဟာ သန့်စင်ပြီး စွမ်းရည်မြင့်မားတဲ့ မော်တော်ကားတွေနဲ့ ကုန်တင်ကားတွေ အသုံးပြုမှုမှာ ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်သူဖြစ်ရမယ်။ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစမှာ အမေရိကန်ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာရောင်းချမယ့် ခရီးသည်တင်ကားအသစ်တွေနဲ့ လိုက်ထရပ်ကားသစ်တွေ အားလုံးရဲ့ အရေအတွက် ၅၀ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဘက်ထရီလျှပ်စစ်ကားတွေ ၊ စွမ်းအင်နှစ်မျိုးသုံး ဟိုက်ဘရစ်လျှပ်စစ်ကားတွေ (ဒါမှမဟုတ်) လောင်စာဆဲလ်လျှပ်စစ်ကားတွေအပါအဝင် ကာဘွန်ထုတ်လွှတ်မှုလုံးဝမရှိတဲ့ ကားတွေဖြစ်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ကို အထောက်အကူပြုစေမယ့်အမိန့်ကို သမ္မတဘိုင်ဒန်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်”
Ford၊ General Motors နှင့် Stellantis အပါအဝင် မော်တော်ယာဉ်ကုမ္ပဏီများမှ အမှုဆောင်များ အပြင် ဥပဒေပြုအမတ်များနှင့်အမေရိကန်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်သမားများ သမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်များသည် သြဂုတ် ၅ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက အိမ်ဖြူတော်၌ ဘိုင်ဒန်နှင့် အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လျှပ်စစ်ကားထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Tesla Inc မှ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Elon Musk က၎င်းတို့ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ဖိတ်ကြားခြင်းမခံရသည်မှာ ထူးဆန်းကြောင်း သြဂုတ် ၅ ရက် အစောပိုင်းတွင် ၎င်း၏ တွစ်တာအကောင့်၌ ရေးသားခဲ့သည်။
Tesla ၏အလုပ်သမားများသည် မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်သမားများသမဂ္ဂ၏ အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သဖြင့် အဆိုပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ပါဝင်ခွင့်မရရှိခဲ့ခြင်းလားဟူ၍ မေးမြန်းချက်အပေါ် အိမ်ဖြူတော်သတင်းပြန်ကြားရေးအတွင်းရေးမှူး Jen Pesaki က “ခင် ဗျားတို့စိတ်ကြိုက် ကိုယ်ပိုင်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်’’ ဟု သတင်းစာရှင်းပွဲ ၌ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, Aug.5(Xinhua) — U.S. President Joe Biden Thursday signed an executive order calling for half of new vehicles sold in U.S. by 2030 to be zero-emission.
“I’ll let you draw your own conclusion,” said White House Press Secretary Jen Psaki when asked duringapress briefing whether Tesla was being excluded from the event because its employees were not part of an automotive union. Enditem